ILS USA - Private visa - Zonke abaqondisi-mthetho kwi-Russia! Oyena lawyer portal.
Ngokufanayo Private Visas ingaba ekhutshwe KUTHI abemi, bamazwe angaphandle, kwaye stateless abantu abajikelezayo ukuba isirashiya abo bafumene i-isimemo esivela inkqubo esemthethweni ummeli, okanye mhlawumbi i-Russian ummi okanye langaphandle wesizwe ukuba amkunyela njengokuba umhlali osisigxina kwi-isirashiyaEzi visas zibe ekhutshwe kuba Kanye okanye Kabini-ingeniso xesha ukuya kwi-iintsuku ezingama, okanye i- ngonyaka-Ezininzi Ungeniso-visa ngokungqinelana nomgaqo-Simplification ka-Visa Formalities phakathi isirashiya ne-United States. Ukuze ufake isicelo kuba -unyaka ezininzi-ingeniso Private-Visa, nceda ubonise ngokupheleleyo ezintathu ngonyaka ixesha njengoko ubude bexesha hlala kwi-isirashiya xa ukuzalisa ngaphandle visa isicelo. Ukuze ufumane Unyaka Private Visa isimemo kufuneka esikhutshwe lilizwe Russian ummi ukuba sibhaliswe kwi-Russia, okanye nge KUTHI ummi ukuba sele residency isimo kwi-Russia kuba ixesha elide kunokuba iintsuku ezingama. Owamkelekileyo imeko ibe umsebenzi imvume, i-multi-ingeniso student-visa, okanye diplomatic okanye igosa abasebenzi kakuhle kwi-NATHI Consulate emmandleni ye-isirashiya. Kanjalo, Multi-Ingeniso Unyaka Private visas KUTHI abemi ivumela kuba ubude hlala ayisasebenzi kwe- iinyanga ngamnye ngeniso, ngaphakathi visa xesha. EU (European Union) Abemi kufuneka anike ikopi yabo ye-inshorensi yezempilo-nkqubo ikhadi, ihamba kunye zabo-nkqubo amaxwebhu ukuba siyasebenza kwi-isirashiya kuba visa ixesha, ngaphandle kokuba kumazwe ukhuselwe izivumelwano phakathi kwala mazwe mabini. Ukuba akunjalo EU abemi, ngoko ke nceda buza visa umbindi abasebenzi nokuba ngaba kufuna i-inshorensi yezempilo. Yakho mgaqo-nkqubo kufuneka kuquka ulwazi malunga clinics ngameva Saserashiya. Abemi ye-Ireland kwaye Georgia ezifunekayo ukuze furnish ubungqina ukhathalelo-inshorensi ukuba siyasebenza ngenxa yabo yonke visa ixesha kwi-isirashiya. Thatha Qaphela! I-Russian Consulate unelungelo buza ezongezelelweyo uxwebhu ukuze inkqubo yakho visa isicelo, buza ukuba kuza kuba kho enze udliwano-ndlebe, okanye ukwandisa i-visa ukuqhubela ixesha ukuba isicelo sakho. Ingqwalasela! Ukuba akunjalo, a ummi ka-United States, kufuneka anike zilandelayo ukongeza amaxwebhu wakho: Xa nokufaka visa kuyimfuneko ukubonelela uxwebhu ukuba ufuna ayisasebenzi endinako Russian ubumi, ezifana: ngokungqinelana nomgaqo-Russian umthetho, visas awunakuba kukhutshwa kwi-Russian abemi kunye lixesha passports. Thina remind ukuba ngokungqinelana ukuba Inqaku ka-Russian Umthetho"Kwi ubumi ye-isirashiya", abantwana abazelwe ezimbini abazali abakhoyo Russian abemi, ngokuzenzekelayo inzuzo Russian ubumi, nokuba indawo yokuzalwa. Kule meko visas asingawo ekhutshwe, kwaye baya kufuneka ufake isicelo sephepha-Russian ubumi, okanye kuba zabo ulwazi ibhalwe kulo incwadi yokundwendwela omnye kwabazali babo, okanye ufumane Russian incwadana yokundwendwela. Ukuba nokufaka encinci, nceda unike ikopi zabo Zokuzalwa Isiqinisekiso, apho kucacile ukuba, ubuncinane, zabazali ayiyo ummi ye-isirashiya. EU (European Union) Abemi kufuneka anike ikopi yabo ye-inshorensi yezempilo-nkqubo ikhadi, ihamba kunye zabo-nkqubo amaxwebhu ukuba siyasebenza kwi-isirashiya kuba visa ixesha, ngaphandle kokuba kumazwe ukhuselwe izivumelwano phakathi kwala mazwe mabini. Ukuba akunjalo EU abemi, ngoko ke nceda buza visa umbindi kubalawuli nokuba ngaba kufuna i-inshorensi yezempilo.
Yakho mgaqo-nkqubo kufuneka kuquka ulwazi malunga clinics ngameva Saserashiya.
Abemi ye-Ireland kwaye Georgia ezifunekayo ukuze furnish ubungqina ukhathalelo-inshorensi ukuba siyasebenza ngenxa yabo yonke visa ixesha kwi-Russian Federation. Thatha Qaphela! I-Russian Consulate unelungelo buza ezongezelelweyo uxwebhu ukuze inkqubo yakho visa isicelo, buza ukuba kuza kuba kho enze udliwano-ndlebe, okanye ukwandisa i-visa ukuqhubela ixesha ukuba isicelo sakho. Ingqwalasela! Ukuba akunjalo, a ummi ka-United States, kufuneka anike zilandelayo ukongeza amaxwebhu wakho: Kanye okanye Kabini-ingeniso Private visa (Udidi kuba amaqabane nabantwana abajikelezayo ihamba kunye Russian Ummi): Xa nokufaka visa kuyimfuneko ukubonelela uxwebhu ukuba ufuna ayisasebenzi endinako Russian ubumi, ezifana: ngokungqinelana nomgaqo-Russian umthetho, visas awunakuba kukhutshwa kwi-Russian abemi kunye lixesha passports. Thina remind ukuba ngokungqinelana ukuba Inqaku ka-Russian Umthetho"Kwi ubumi ye-isirashiya", abantwana abazelwe ezimbini abazali abakhoyo Russian abemi, ngokuzenzekelayo inzuzo Russian ubumi, nokuba indawo yokuzalwa. Kule meko visas asingawo ekhutshwe, kwaye baya kufuneka ufake isicelo sephepha-Russian ubumi, okanye kuba zabo ulwazi ibhalwe kulo incwadi yokundwendwela omnye kwabazali babo, okanye ufumane Russian incwadana yokundwendwela. Ukuba nokufaka encinci, nceda unike ikopi zabo Zokuzalwa Isiqinisekiso, apho kucacile ukuba, ubuncinane, zabazali ayiyo ummi ye-isirashiya. EU (European Union) Abemi kufuneka anike ikopi yabo ye-inshorensi yezempilo-nkqubo ikhadi, ihamba kunye zabo-nkqubo amaxwebhu ukuba siyasebenza kwi-isirashiya kuba visa ixesha, ngaphandle kokuba kumazwe ukhuselwe izivumelwano phakathi kwala mazwe mabini. Ukuba akunjalo EU abemi, ngoko ke nceda buza visa umbindi kubalawuli nokuba ngaba kufuna i-inshorensi yezempilo. Yakho mgaqo-nkqubo kufuneka kuquka ulwazi malunga clinics ngameva Saserashiya.
Abemi ye-Ireland kwaye Georgia ezifunekayo ukuze furnish ubungqina ukhathalelo-inshorensi ukuba siyasebenza ngenxa yabo yonke visa ixesha kwi-isirashiya.
Thatha Qaphela! I-Russian Consulate unelungelo buza ezongezelelweyo uxwebhu ukuze inkqubo yakho visa isicelo, buza ukuba kuza kuba i-enze udliwano-ndlebe, okanye ukwandisa i-visa ukuqhubela ixesha ukuba isicelo sakho. Xa nokufaka visa kuyimfuneko ukubonelela uxwebhu ukuba ufuna ayisasebenzi endinako Russian ubumi, ezifana: ngokungqinelana nomgaqo-Russian umthetho, visas awunakuba kukhutshwa kwi-Russian abemi kunye lixesha passports. Thina remind ukuba ngokungqinelana ukuba Inqaku ka-Russian Umthetho"Kwi ubumi ye-isirashiya", abantwana abazelwe ezimbini abazali abakhoyo Russian abemi, ngokuzenzekelayo inzuzo Russian ubumi, nokuba indawo yokuzalwa. Kule meko visas asingawo ekhutshwe, kwaye baya kufuneka ufake isicelo sephepha-Russian ubumi, okanye kuba zabo ulwazi ibhalwe kulo incwadi yokundwendwela omnye kwabazali babo, okanye ufumane Russian incwadana yokundwendwela. Ukuba nokufaka encinci, nceda unike ikopi zabo Zokuzalwa Isiqinisekiso, apho kucacile ukuba, ubuncinane, zabazali ayiyo ummi ye-isirashiya. EU (European Union) Abemi kufuneka anike ikopi yabo ye-inshorensi yezempilo-nkqubo ikhadi, ihamba kunye yabo-nkqubo amaxwebhu ukuba siyasebenza kwi-isirashiya kuba visa ixesha, ngaphandle kokuba kumazwe ukhuselwe izivumelwano phakathi kwala mazwe mabini. Ukuba akunjalo EU abemi, ngoko ke nceda buza visa umbindi kubalawuli nokuba ngaba kufuna i-inshorensi yezempilo. Yakho mgaqo-nkqubo kufuneka kuquka ulwazi malunga clinics ngameva Saserashiya.
Thatha Qaphela! I-Russian Consulate unelungelo buza ezongezelelweyo uxwebhu ukuze inkqubo yakho visa isicelo, buza ukuba kuza kuba kho enze udliwano-ndlebe, okanye ukwandisa i-visa ukuqhubela ixesha ukuba isicelo sakho. Ingqwalasela! Ukuba akunjalo, a ummi ka-United States, kufuneka anike zilandelayo ukongeza amaxwebhu wakho: Kanye okanye Kabini-ingeniso Private visa (Udidi kuba amaqabane nabantwana abajikelezayo ihamba kunye Russian Ummi). Idilesi kufuneka zibhalwe zilandelayo Russian esezantsi kakhulu legibly: Xa nokufaka visa kuyimfuneko ukubonelela uxwebhu ukuba ufuna ayisasebenzi endinako Russian ubumi, ezifana: ngokungqinelana nomgaqo-Russian umthetho, visas awunakuba kukhutshwa kwi-Russian abemi kunye lixesha passports.
Thina remind ukuba ngokungqinelana ukuba Inqaku ka-Russian Umthetho"Kwi ubumi ye-isirashiya", abantwana abazelwe ezimbini abazali abakhoyo Russian abemi, ngokuzenzekelayo inzuzo Russian ubumi, nokuba indawo yokuzalwa.
Kule meko visas asingawo ekhutshwe, kwaye baya kufuneka ufake isicelo sephepha-Russian ubumi, okanye kuba zabo ulwazi ibhalwe kulo incwadi yokundwendwela omnye kwabazali babo, okanye ufumane Russian incwadana yokundwendwela. Ukuba nokufaka encinci, nceda unike ikopi zabo Zokuzalwa Isiqinisekiso, apho kucacile ukuba, ubuncinane, zabazali ayiyo ummi ye-isirashiya. Rhoqo Ukuqhubela Ixesha Ikhalenda Imihla ukususela mhla amaxwebhu ingaba ayingenisileyo, isirussian Consulate kuba kovavanyo. **Expedited Ukuqhubela Ixesha zomsebenzi ukususela mhla amaxwebhu ingaba ayingenisileyo, isirussian Consulate kuba kovavanyo.
**Enye Ingeniso, phinda-Phinda u-Ngeniso, Unyaka Ezininzi-Ingeniso Visas kusenokuba expedited kuphela phantsi Kaxakeka iimeko e yomtshutshisi Consulate.
Intlawulo uyavunywa ukwimo Imali Ukuze okanye Cashier ke, Khangela made ziyabhatalwa"Invisa Logistic Iinkonzo, LLC", kuba abo nokufaka isicelo kwi-umntu, imali kanjalo olwamkelekileyo. Kuba ulwazi malunga nendlela Efanayo-Day Zichaziwe kweenkonzo amaxwebhu wakho ukuba Consulate, cofa apha Ngenxa ukuvala ye-Firefox Francisco Consulate, xa kusetyenziswa kulo mntu ngexesha lethu Visa Umbindi kwi-Firefox Francisco, kuya kuba kho enye imali ka - $ kuba amaxwebhu ekufuneka ekusetyenzwe ngokusebenzisa zethu comment ingxwaba-ofisi. Non-NATHI abemi okanye stateless abantu kufuneka uqhagamshelane a Call Umbindi Iarhente ukuba ascertain i-Consulate Imali. Consular iintlawulo kwaye iyaqhubekeka amaxesha kuba bamazwe angaphandle kwaye stateless abantu zimiselwe libhunga Consulates ye-isirashiya.
Kwimeko outright denial ukuba isicelo sakho ngu - Russian Consulate, Consular Imali kwaye Iyaqhubekeka ke Imali awuyibuyiselwa.
Russian Visa Isicelo Umbindi inika enye inkonzo kuba ukugqibezela zombane visa uxwebhu lwesicelo xa kokufaka amaxwebhu ukuba Visa Embindini, okanye ulungiso egameni-sicelo (wagunyazisa ummeli) wenza iimpazamo kwi-uxwebhu lwesicelo. Visa uxwebhu lwesicelo ngu wazaliswa kwi isiseko amaxwebhu kwaye ulwazi linikelwe-sicelo, kwaye watyikitywa-sicelo ubuqu. Visa inkqubo yokulungisa imali ingaba ibe igcwalisiwe ukongeza inkonzo imali, kwaye dollazi ngamnye isicelo. Nceda buza Abasebenzi ye-Russian Visa Isicelo Umbindi malunga le nkonzo, xa usenza isicelo i-visa.
yovavanyo attorneys - Intanethi-Russian abaqondisi-mthetho
Pengacara hak asasi manusia dibunuh di Moscow - berita Dunia - The Guardian